नेताहरु जितेर जान्छन् तर फर्केर आउँदैनन् भन्ने गुनासो तोड्छु | Indrenionline.com
प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार, पूर्वीरुकुम– २ एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) सचिवालय सदस्य तथा ५ नं. प्रदेश संयोजक
राजनीतिक आन्दोलन सकियो अवको काम भनेकै विकास निर्माणको हो । पहिलो कुरा म नेताहरु जितेर जाने र फर्केर आउँदैनन् भन्ने जनताको गुनासोको अन्त्य गर्छु र सधैँ जनताको विचमा रहेर जनतासँगै सल्लाह गरेर सवै विकास निर्माणको काम गर्छु । दोश्रो कुरा सडक, खानेपानी, सिचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत लगाएतका समस्या छन । जनप्रतिनिधी भएका हैसियतले मैले यीनै विकास निर्माणका काम गर्ने छु ।
अहिले माओवादी केन्द्र र एमालेबीच भनिएको तालमेलको उद्देश्य के हो ? अहिलेको एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको सहमति वामगठबन्धन निर्माण गरि आगामी संघ तथा प्रदेशको निर्वाचनमा तालमेल गर्दै एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र निर्माण गर्ने र देशमा समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ हो ।
विभिन्न जनपक्षीय आन्दोलन, जनसंघर्ष, जनयुद्ध जस्ता जनमुक्ति आन्दोलनका कारण देशमा गणतन्त्र आएको छ । लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै संविधान जारी भएको छ । त्यो संविधानमै हामीले समाजवादउन्मुख दिशातर्फ जाने भनेर उल्लेख गरेका छौं । राजनीतिक, नागरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका सवालमा कम्युनिष्टहरुले नै नेतृत्व गरे । छुट्टा छुट्टै भएर गर्दा पनि यति ठूला परिवर्तन भए भने सँगै बसेर काम गर्दा झन धेरे अगाडि बढ्न सकिन्छ । फेरि समाजवादमा पुग्ने महान लक्ष्य लिएर अघि बढेपछि अनि दुई दलको एउटै बाटो भएपछि एउटै पार्टीमा रहेर काम गर्नुपर्छ भनेर नेतृत्वले सोचेको हो । समाजवादमा जानको लागि संगठनात्मक संरचना पनि बलियो हुन जरुरी छ ।
यसकारण वामपन्थीहरुको एउटा स्थिर सरकार निर्माण गर्ने तत्कालिक लक्ष्यका साथ वामपन्थी गठबन्धन गरिएको छ र सकेसम्म एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र निर्माण गरिन्छ र त्यति नभए पनि दुई पार्टी विच एकीकरण भने अवश्य हुन्छ । समाजवादी क्रान्तिका लागि अब हामी एक्ला–एक्लै भएर अघि बढ्न सक्दैनौं । यो कुनै स्वार्थ नभएर एजेण्डाको आधारमा एकता भएको छ ।
पार्टी एकता कशैको मनोगत चाहनाले हुने हैन । नेतााले मात्र चाहेर मात्र हुँदैन् । यसो हुने भए त २००६ सालमा स्थापना भएको कम्युनिष्ट पार्टी किन विभाजित र टुक्राटुक्र हुन्थे ? एमालेले पनि टुटफुट विभाजनको दुखद अवस्था व्यहोर्दै एकीकृत हुँदै आयो । माओवादी पनि विभिन्न टुक्रामा विभाजित भएर एकीकृत बन्यो । त्यो भन्दा ठूलो जनताले सवै बाम एक ठाम । एउटै लक्ष्य, उद्देश्य बोकेका पार्टीहरुलाई फरक फरक ठाउँमा पाउँदा र भोट हाल्दा एउटै कम्युनिष्ट बन भनेर दवाव सृजना गर्दै आएका थिए । यसले गर्दा आम नेता कार्यकर्तामा यो एकताले उत्साह नै पैदा गरेको छ । कम्युनिष्ट विचार मान्ने जनताहरुमा झन ठूलो उत्साह र आशा जागेको छ ।
योे वस्तुगत परिस्थिति र जनताको मागको आधारमा नेताहरुले यस्तो निर्णय लिनुभएको हो । हिजो रुसमा वेल्सिविक र मेन्सिविकहरुमा नि केहि राजनीतिक र सैद्धान्तिक भिन्नताहरु थिए तर लेनिनले जनताको चाहना भन्दै पार्टी एकतामा जोड दिनुभयो । हिजो दुवै पार्टी फरक फरक आन्दोलन, पृष्ठभूमी, दर्शन र विचारवाटवाट प्रशिक्षित र सहभागी भएर आएका छन । यसैगरी हिजो दुवै पार्टीका कार्यकर्ता र नेताहरु दुश्मनी पनि गरिएको हो । तर, हिजो मलाई के भएको थियो भन्दा देशको आवश्यकता के छ ? भन्ने आधारवाट हे¥याँै भने एकताको महत्व र आवश्यकतालाई आमा जनसमुदाय र कार्यकर्ताले बुझन जरुरी छ ।
झापा आन्दोलनको विरासत बोकेको एमाले र जनयुद्धको एउटा महान अभियानवाट अघि बढेका माओवादी ०६२/०६३ पछि सैद्धान्तिक र वैचारिक रुपमा नजिक हुँदै गएका हाँै । माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनले सशस्त्र क्रान्तिद्धारा नेपालको जनवादी क्रान्ति मूलभूत रुपले सम्पन्न भएको हुँदा बाँकी कार्यभार पूरा गर्न समाजवाद तर्फ जाने निर्णय ग¥यो भने एमालेको नवाँै महाधिवेशनले आजको जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै लोकतान्त्रिक विधिबाट समाजवादको तयारी गर्ने नीति पास ग¥यो । यसरी दुवै पार्टी हिजो भन्दै आएको नेपाल अव अर्धसामन्ति र अर्ध औपनिवेशिक रहेन । जनवादी क्रान्तिका मूलभूत कार्यसम्पन्न भई समाजवादको तयारी गर्ने नीति पास भाएपछि एकताको आधार सैद्धान्तिक रुपमा पनि बलियो बनायो । यी दुवै पार्टीले आ–आफ्ना सिद्धान्तको नामकरण बेग्ला–बेग्लै गरे पनि कार्यभार भने राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्नु रहेको छ । यो एकताले नेपाली राजनीति र समाजमा दीर्घकालिन रुपमा समाजवादको स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
दशवर्षे जनयुद्ध र उन्नाईस दिने जनआन्दोलनवाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको कार्यदीशा निर्माण गर्ने, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व कायम गर्ने, मालेमावादका सार्वभौम सिद्धान्तको आत्मसात गर्ने र आशन्न निर्वाचनमा ६०-४० प्रतिसतले साझा उम्मेद्वार उठाउने विषय नै पार्टी एकताका आधारहरु हुन् ।
४ मंसिर २०७४, सोमबार ११:२२
Previous: विप्लव माओवादीका चितवन इञ्चार्ज पक्राउ
Next: सडक दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न घुम्तिमा कन्भेक्स ऐना